Omume Anyị Nwere Ike Ịkpasu Chineke Iwe​—Otú Anyị Nwere Ike Isi Mee Ka Obi Dị Ya Ụtọ | Kụziere Ụmụ Gị Ihe
DRAW CLOSE TO GOD “Chineke Hụrụ Onye Na-eji Obi Ụtọ Enye Ihe n’Anya”
TEACH YOUR CHILDREN Omume Anyị Nwere Ike Ịkpasu Chineke Iwe​—Otú Anyị Nwere Ike Isi Mee Ka Obi Dị Ya Ụtọ
Olee Otú Unu Si Enweta Ego Unu Ji Arụ Ọrụ Unu?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Mongolian Myanmar Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Ọ̀ dịtụla mgbe mmadụ mere gị ihe were gị ezigbo iwe nke na i bewere àkwá?— * O nweghị onye ga-asị na mmadụ emetụbeghị ihe were ya iwe. Mmadụ nwere ike ịghagide anyị ụgha. Nke a nwere ike ịkpasu anyị iwe. Ọ́ bụghị ya?— Otú ahụ ka ọ dịkwa Chineke. Ọ na-ewute ya mgbe ọ bụla a ghagidere ya ụgha. Ka anyị kwurịta banyere nke a ma hụ otú anyị nwere ike isi mee ka obi tọọ Chineke ụtọ kama ime ihe ga-ewute ya.
Baịbụl kwuru na ụfọdụ ndị sịrị na ha hụrụ Chineke n’anya ‘kpasuru ya iwe’ ma ‘mee ihe wutere’ ya. Ka anyị hụ ihe mere iwe ji ewe Jehova mgbe anyị na-emeghị ihe ọ chọrọ ka anyị mee.
Mmadụ abụọ mbụ Jehova kere n’ụwa mere ihe wutere Jehova nke ukwuu. Mgbe Jehova kere ha, o tinyere ha n’ime paradaịs n’ụwa. Ihe a kpọrọ paradaịs ahụ bụ “ogige Iden.” Ị̀ ma ndị mmadụ abụọ ahụ bụ?— Onye nke mbụ bụ Adam. Onye nke abụọ abụrụ Iv. Ka anyị hụ ihe ha mere nke wutere Jehova.
Mgbe Jehova tinyechara ha n’ogige Iden, ọ gwara ha ka ha lekọtawa ya. Ọ gwakwara ha ka ha mụọ ụmụ ma biri n’ogige Iden ahụ, gwakwa ha na ọ bụrụ na ha erubere ya isi, ha agaghị anwụ anwụ. Ma tupu Adam na Iv amụta ụmụ, o nwere ihe ọjọọ merenụ. Ị̀ ma ihe ọ bụ?— Otu mmụọ ozi mere ka Iv na Adam nupụrụ Jehova isi. Ka anyị hụ otú o si mee ya.
Mmụọ ozi ahụ mere ka ọ dị ka à ga-asị na agwọ na-ekwu okwu. Ma, ihe Iv nụrụ dị ya ụtọ ná ntị. Agwọ ahụ gwara ya na ọ ‘ga-adị ka Chineke.’ Nke a mere ka Iv mee ihe agwọ ahụ gwara ya. Ị̀ ma ihe agwọ ahụ gwara ya mee?—
Iv riri mkpụrụ osisi Jehova gwara Adam ka ha ghara iri. Tupu Chineke ekee Iv, ọ sịrị Adam: “I nwere ike iri mkpụrụ nke osisi ọ bụla dị n’ubi a rijuo afọ. Ma erila mkpụrụ si n’osisi ịma ihe ọma na ihe ọjọọ, n’ihi na n’ụbọchị i riri mkpụrụ si na ya, ị ga-anwụrịrị.”
Iv ma iwu a Chineke nyere ha. Ma, ọ nọ na-ele osisi ahụ anya wee hụ na “mkpụrụ osisi ahụ dị mma oriri nakwa na ọ na-agụsi anya agụụ ike . . . O wee ghọrọ mkpụrụ ya rie.” Iv mechara nye Adam mkpụrụ osisi ahụ, ‘Adam erie ya.’ Olee ihe i chere mere Adam ji rie mkpụrụ osisi ahụ?— Ọ bụ maka na ọ hụziri Iv n’anya karịa otú ọ hụrụ Jehova. Adam chọrọ ime ihe dị Iv mma kama ime ihe dị Chineke mma. Ma, irubere Jehova isi dị mkpa karịa irubere onye ọ bụla ọzọ isi.
Ì chetara agwọ ahụ gwara Iv okwu? Otú ahụ mmadụ nwere ike ime ka ọ dị ka à ga-asị na nwa bebi na-ekwu okwu, o nwere onye mere ka ọ dị ka à ga-asị na agwọ ahụ kwuru okwu. Ma, ọ̀ bụ olu onye na-ekwu okwu n’oge ahụ o yiri ka agwọ ọ̀ na-ekwu okwu?— Ọ bụ olu “agwọ mbụ ahụ, onye a na-akpọ Ekwensu na Setan.”
Ị̀ ma otú ị ga-esi eme ka obi dị Jehova ụtọ?— Otú ị ga-esi eme ya bụ ịna-erubere Jehova isi mgbe niile. Setan turu ọnụ na ya ga-eme ka mmadụ niile na-erubere yanwa isi. Ọ bụ ya mere Jehova ji gwa anyị, sị: “Mara ihe, nwa m, wee mee ka obi m ṅụrịa, ka m wee zaa onye na-akwa m emo okwu.” Ọ bụ Setan na-akwa Jehova emo ma ọ bụ na-akparị ya. Ọ sịrị na ya ga-emeli ka mmadụ niile kwụsị ife Chineke. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka i mee ka obi dị Jehova ụtọ. Otú ị ga-esi eme ya bụ irubere ya isi na ife ya. Ị̀ ga-agbalịsi ike mee otú ahụ?—
Abụ Ọma 78:40, 41
Jenesis 1:26-28; 2:15-17; 3:1-6
Mkpughe 12:9; Ilu 27:11
Septemba 2013 | Gịnị Mere Ndị Mmadụ Ji Atagbu Onwe Ha n’Ahụhụ? Olee Mgbe Ọ Ga-ebi?
ỤLỌ NCHE Septemba 2013 | Gịnị Mere Ndị Mmadụ Ji Atagbu Onwe Ha n’Ahụhụ? Olee Mgbe Ọ Ga-ebi?